I-Airbus kunye neAir France zijolise ikakhulu kwiinqwelomoya ezonga amandla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Airbus kunye neAir France zijolise ikakhulu kwiinqwelomoya ezonga amandla
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-ALBATROSS ijonge ukubonisa, ngothotho lweesango ukuya kwisango ukubonisa inqwelomoya kwiYurophu iphela, amandla okuphumeza uninzi lwenqwelomoya osebenza ngamandla kwixesha elifutshane, ngokudibanisa iR & D ezininzi zobugcisa kunye nokusebenza okutsha.
Yaziswa ngoFebruwari 2021, I-ALBATROSS lilinge elikhulu lamaqela achaphazelekayo aseYurophu akhokelwa yiAirbus.
I-ALBATROSS ilandela indlela ebanzi yokufikelela kuzo zonke izigaba zenqwelomoya, ebandakanya ngokuthe ngqo onke amaqela achaphazelekayo.
Ukuqala ngo-Septemba ngo-2021, uvavanyo lwangoku luya kubandakanya ukubhabha kwenqwelomoya, ukubonisa izisombululo zokusebenza ezivuthiweyo ezinokubakho kwi-Fuel kunye nokonga i-CO1,000.
I-Airbus, Air France kunye ne-DSNA, uMboneleli weNkonzo yokuhamba ngenqanawa eFrance (ANSP), sele beqalile ukusebenzela uphuhliso "lweenqwelomoya ezininzi ezonga amandla", kulandela ukubhabha kwabo kokuqala eParis ukuya eToulouse Blagnac ngomhla womsitho weNgqungquthela yeAirbus. Inqwelomoya ibhabhe umkhondo ophucukileyo, ophawula owokuqala kuthotho lwezilingo ezicwangcisiweyo ngo-2021 nango-2022 ngaphakathi kwesakhelo seprojekthi ye-Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU) “ALBATROSS”.
Yaziswa ngoFebruwari 2021, i-ALBATROSS lilinge elikhulu lamaqela achaphazelekayo aseYurophu akhokelwa Airbus. Ijolise ekuboniseni, ngothotho lweesango ukuya kwisango ukubonisa inqwelomoya kwiYurophu iphela, ukubanakho kokumiliselwa kweenqwelomoya ezininzi ezonga amandla kwixesha elifutshane, ngokudibanisa iindlela ezininzi zobugcisa kunye nokusebenza kweR & D.
"I-ALBATROSS" ilandela indlela ebanzi yokugubungela zonke izigaba zokuhamba ngenqwelomoya, ezibandakanya ngokuthe ngqo onke amaqela achaphazelekayo (afana neenqwelomoya, ii-ANSPs, abaphathi benethiwekhi, izikhululo zeenqwelo moya kunye nomzi mveliso) kunye nokujongana nemiba yokusebenza kunye nethekhinoloji yokuhamba ngenqwelomoya kunye nolawulo lwezithuthi zomoya (ATM). Izisombululo ezininzi ziya kusetyenziswa ngexesha lemiboniso yenqwelomoya, ukusuka kwinkqubo entsha yokuchaneka kokunyuka okunyukayo kunye nokwehla, ulawulo olunamandla ngakumbi lwezithintelo eziyimfuneko zomoya, ukusetyenziswa kweteksi okuzinzileyo kunye nokusetyenziswa kwamafutha eenqwelo (SAF).
Ngombulelo kugqithiso lwedatha enamacala amane, i-ATM iya kuba nakho ukwenza ngcono kwaye iqikelele ngcono indlela yenqwelomoya, ngaloo ndlela iyenza ukuba ikwazi ukunciphisa ngokukhawuleza nangokuqinisekileyo inyawo lendiza.
Ukuqala ngo-Septemba ngo-2021, ezi zilingo ziphilayo ziya kubandakanya ukuboniswa kweenqwelo moya ezi-1,000 2, zibonisa izisombululo zokusebenza ezivuthiweyo ezinokubakho nge-oyile kunye nokonga i-CO2022. Iziphumo zokuqala kulindeleke ukuba zifumaneke ngo-XNUMX.
Amaqabane e-ALBATROSS Airbus, Air France, Ulawulo lwe-Austro, i-DLR, i-DSNA, i-Eurocontrol, i-LFV, iLufthansa, iNovair, iSchiphol, iiNkqubo zeSikhululo senqwelomoya, i-SWEDAVIA, iSWISS, iThales AVS France kunye neWIZZ AIR UK.
Inkxaso-mali yeprojekthi ibonelelwa yi-EU phantsi kwesiVumelwano seGranti esinguNombolo 101017678.